Top 10 cuốn sách học tiếng Anh cho bé 3 tuổi ba mẹ nhất định phải biết | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 cuốn sách học tiếng Anh cho bé 3 tuổi ba mẹ nhất định phải biết | Muasalebang in Muasalebang
IsiNgisi siwulimi olubaluleke kakhulu empilweni yanamuhla. Ukukhetha Izincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3 ukuze ufaneleke futhi uzuze umphumela omuhle kakhulu ukukhathazeka okuphezulu kwabazali. Kulesi sihloko, ngizokwabelana ngezincwadi ezidume kakhulu abazali abangabhekisela kuzo.
1 Ingabe ingane eneminyaka engu-3 ubudala kufanele ifunde isiNgisi?
2 Izincwadi eziyi-10 eziphezulu zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3
2.1 Isiqhingi sami esincane 1, 2, 3
2.2 Ubani igama lakho?
2.3 Umndeni nabangane Izinga 1, 2, 3, 4, 5
2.5 Isayensi Emangalisayo 1, 2, 3
2.6 Izigxivizo zeminwe Ileveli 1, 2, 3
2.7 Isichazamazwi sokuqala sesiNgisi somntwana
2.8 Uwuchungechunge lwezincwadi
2.9 Ihlakaniphile ingane, uyazigqokisa
2.10 Imephu yengqondo
3 Izindlela zokufundisa isiNgisi ezinganeni ezineminyaka emi-3
3.1 Funda ezintweni ezijwayelekile
3.2 Funda ngezithombe, amavidiyo anemibala
3.3 Ukufunda ngezingoma
3.4 Funda ngama-jigsaw puzzle
3.5 Yisebenzise izikhathi eziningi futhi uyibuyekeze kaningi
Ingabe ingane eneminyaka engu-3 ubudala kufanele ifunde isiNgisi?
Namuhla, abazali abaningi bavumela izingane zabo zifunde isiNgisi kusukela zisencane. Ingabe kuhle lokhu? Ingabe kuthinta ukufunda kwengane ukukhuluma isiVietnam, kubangele ukuthi ingane ibe nenkinga yolimi?
Ngokubona kochwepheshe abaningi, funda isiNgisi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Futhi iminyaka engu-3 ubudala yisikhathi lapho izingane zifuna ukwazi ngayo yonke into ekuphileni futhi zamukele kalula ulimi lwakamuva. Kuzuzisa kakhulu ukuthi izingane zifunde isiNgisi lapho zineminyaka emi-3. Ngokuqondile:
Misa ngokushesha, hlela kalula ukuphimisela kwengane ukuze uzisize zikhulume ngesiNgisi ngokwemvelo njengomdabu
Kulesi sigaba, umntwana unamahloni amancane, akesabi amaphutha futhi ngokuvamile ulingisa abantu abadala, ngakho-ke ungakwazi kalula ukudala i-reflex yemvelo ekukhulumeni ngesiNgisi.
Siza ingane yakho ukuthi isebenze kakhulu, ihlakaniphe, ikhulise ikhono lokugxilisa ingqondo
Nokho, ukuze kugwenywe ukuphazamiseka kolimi, noma ukukhohlwa ulimi lwebele, zisuka nje ukufunda isiNgisi, abazali kudingeka baqondise izingane zabo ngendlela yokuhlukanisa lezi zilimi ezimbili. Ngaphandle kwalapho ingane yakho ifunda isiNgisi ekhaya noma esikhungweni, xhumana nayo ngesiVietnam. Ikakhulukazi, abazali kufanele bagweme “ingxenye ye-Vietnamese, ingxenye yesiNgisi” lapho bekhuluma nezingane!
Izincwadi eziyi-10 eziphezulu zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3
Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zezincwadi zokufunda isiNgisi ezifanele izingane ezineminyaka emi-3 ezivela kubashicileli abahlukene. Abazali bangazithola ezitolo eziningi zezincwadi ezinkulu nezincane ezweni lonke. Nokho, iyiphi incwadi enhle ngempela, engashukumisa umsebenzi wobuchopho, isize izingane zijwayele isiNgisi? Nazi izincwadi ezingu-10 ezihamba phambili namuhla.
Isiqhingi sami esincane 1, 2, 3
Njengencwadi yokuqala abazali okungafanele baphuthelwe kuyo lapho befuna isethi efanelekayo yezincwadi zesiNgisi zezingane ezineminyaka engu-3 ubudala, i-My Little Island 1, 2, 3. Uhlelo lokufunda lunikeza ingcebo yolwazi ngezindlela ezicacile, ezisizayo. izingane zithola ugqozi olwengeziwe ngesifundo sesiNgisi.
Okuqukethwe: Izincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka engu-3 ubudala zihlanganisa izigigaba ezijabulisayo, ezikhuthaza izingane ukuba zibe nogqozi olwengeziwe lokuzijabulisa nokufunda isiNgisi. Ngokwezinga ngalinye, uchungechunge lwezincwadi luzoba nokuthuthuka kolwazi nesilulumagama. Ungakhetha ukuthenga incwadi efanele izinga lengane yakho.
Intengo: 341,000 VND
Le ncwadi ingenye yezincwadi ezine Funda isiNgisi nge-Harrap’s Kid enezihloko ezijwayelekile ekuphileni kwansuku zonke. Izingane zizothola ithuba lokuchayeka kulwazi lwamagama olusha, zifunde ulwazi oluwusizo kakhulu futhi ngaphezu kwakho konke zizizwe zijabule futhi zijabule ngemva kokufunda le ncwadi.
Imayelana nani: Le ncwadi ikhuluma ngohambo olujabulisayo futhi ingane yakho izofunda ukuzethula lapho ihlangana nabangane abasha. Le ncwadi inetafula lamagama okumele omama nezingane balilandele kalula. Ngesikhathi esifanayo, isixhumanisi somsindo esinamathiselwe sizosekela futhi sisize ingane yakho ithuthukise amakhono okulalela nokukhuluma.
Intengo: 31,000 VND
Umndeni nabangane Izinga 1, 2, 3, 4, 5
Njengeqoqo elidume kakhulu lezincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3 ukusiza izingane zifunde isiNgisi, Umndeni kanye Nabangane Amazinga 1, 2, 3, 4, 5 akhethwa abazali abaningi ukuba bakhethele izingane zabo. Incwadi iqukethe amaleveli angu-5, futhi abazali bangakhetha ileveli elifanele ileveli yengane yabo.
Okuqukethwe: Iqoqo lezincwadi lihlanganisa izihloko ezijwayeleke kakhulu ekuphileni kwansuku zonke njengabangane abakhulu, isikole, isibhedlela… Isihloko ngasinye sinesilulumagama esihlukile, ngakho izingane zingabamba kalula futhi zifunde inombolo enkulu yamagama amasha. Le ncwadi inemifanekiso emihle nehlaba umxhwele, ngakho idonsa ukunaka komntwana ngaphandle kwengcindezi yabazali.
Intengo: 94,000 VND
Enye iqoqo lezincwadi zokufunda zesiNgisi zezingane ezineminyaka engu-3 ezithinta kakhulu abazali nezingane ezineminyaka emi-3 ithi Masihambe. Uchungechunge lwezincwadi ludumile emazweni amaningi emhlabeni jikelele, kubandakanya neVietnam.
Okuqukethwe: Uchungechunge lwezincwadi lukhuluma ngohambo oluthokozisayo olunezinto eziningi ezisha ezithakazelisayo. Uzokwazi ukulandela izingane uye emazweni amasha. Njengoba ilukuluku nothando lokuthola ulwazi kuvamile ezinganeni, ngokuqinisekile zizolujabulela lolu chungechunge lwezincwadi. Izingane azifundi nje ukwahlulela, ukuthuthukisa umcabango wazo kanye nokucabanga, kodwa futhi zifunda amagama amaningi amaningi ongawasebenzisa kuzo zonke izimo.
Isayensi Emangalisayo 1, 2, 3
Njengochungechunge lwezincwadi ezibhalwe ngababhali abadumile, i-Amazing Science 1, 2, 3 iyisiphakamiso esihle kakhulu sokusiza izingane zithuthukise izinga lazo lesiNgisi. Iphuzu elihle lalelo sethi lezincwadi ukuthi zonke zethulwa ngokwesayensi kakhulu, ngokulandelana, ngezithombe ezicacile nezinhle ukuze izingane zizibambe kalula futhi zizimunce.
Okuqukethwe: Iqoqo lezincwadi lihlanganisa ulwazi oluyisisekelo lwesayensi, izingane azikwazi nje ukuhlola umbono womhlaba kodwa futhi zifunda ulwazimagama oluningi oluwusizo. Ulwazi olusencwadini alunamthungo futhi luyaqhubeka ukusuka ezingeni eliphansi kuye phezulu. Iqoqo lezincwadi lizosiza izingane zifunde ukuthanda nokuvikela imvelo. Le ncwadi ejabulisayo ngokuqinisekile izokwenza ingane yakho ithandane.
Intengo: 41,000 VND
Izigxivizo zeminwe Ileveli 1, 2, 3
Uchungechunge lwezincwadi oluvela endlini yokushicilela edumile yakwaMacmillan ngelezingane zasenkulisa ezineminyaka emi-3 kuye kweyi-5, ngakho abazali bangaqiniseka. Isethi yezincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka engu-3 ubudala ihlanganisa amazinga angu-3 alingana nobunzima obandayo. Lapho zifunda lolu chungechunge lwezincwadi, izingane zizogqugquzeleka ukuba zikwazi ukusungula izinto futhi zizimisele ukufunda.
Imayelana nani: Incwadi ngayinye iqukethe izingqikithi ezilula eziyi-10, ezizungeza impilo yansuku zonke. Lokhu kwenza kube lula ngezingane ukuthi zifinyelele futhi zibambe amagama ajwayelekile. Iqoqo lezincwadi linezithombe ezinhle, ezimibalabala ngakho izingane zikuthakasele kakhulu ukufunda. Masizilolonge amakhono esiNgisi nezingane zakho ngalolu chungechunge lwezincwadi ezinhle kakhulu.
Isichazamazwi sokuqala sesiNgisi somntwana
Incwadi yokufunda yesiNgisi yezingane ezineminyaka engu-3 ubudala elungele izingane eziqala ukujwayela lolu limi isichazamazwi sokuqala sesiNgisi somntwana. Le ncwadi isemikhiqizweni eyi-100 ethengiswa kakhulu kunazo zonke enyangeni ekhethwe abazali abaningi. Ngomklamo olula kodwa ohlaba umxhwele ngokufanayo, le ncwadi yazuza ngokushesha izinhliziyo nokukhangwa kwezingane.
Okuqukethwe: Lesi sichazamazwi siqukethe amagama esiNgisi angaphezu kuka-400, izingane zizokwazi ukupela ngendlela efanele futhi ziqonde ngokugcwele incazelo nokusetshenziswa kwazo. Imifanekiso emihle, ifonti enkulu ebonakala kalula, imibala egqamile isiza izingane ukuba zibambe ngokushesha. Lesi sichazamazwi asomile, kodwa kunalokho sithakazelisa kakhulu ngokuzivocavoca okujabulisayo ukusiza izingane zihlanganise futhi zibambe ngekhanda ulwazimagama.
Intengo: 127,000 VND
Uma umama efuna ukuthola isethi yekhwalithi yezincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3 ukuze zikwazi ukufunda isiNgisi, uchungechunge lwezincwadi lwe-U Òa luyisinqumo esihle kakhulu. Iqoqo lezincwadi ezifanele izingane ezineminyaka engu-1 kuya kwemi-5 ubudala lihlanganisa izincwadi ezi-5. Imidwebo ecace ngokwedlulele nekhangayo iyiphuzu elihlanganisayo ochungechungeni lwezincwadi elenza izingane zijabule futhi zikhulise umcabango wazo.
Okuqukethwe: Izincwadi ezi-5 ziyizinto ezi-5 ezihlukene ezihlanganisa: Izizwa kanjani ingane yakho? Ithandani ingane? Ithini ingane? Iphi inkaba yengane? Izinzwane, izindlebe nekhala Okuqukethwe okulula ukusiza izingane zizitholele zona kanye nezitho zazo zomzimba. Sicela uzinike isikhathi sokuqondisa ingane yakho ukuze ikwazi ukuyisebenzisa kahle le ncwadi.
Intengo: 32,000 VND
Ihlakaniphile ingane, uyazigqokisa
Le ncwadi ilula kakhulu ifanele izingane ezineminyaka emi-3 kuya kwemi-5 ubudala. Izingane zizofunda ukuzimela futhi zizilungisele izingubo zazo ngemva kokufunda incwadi.
Okuqukethwe: Incwadi isiza izingane ukubona izinhlobo eziyisisekelo zezingubo zomuntu siqu. Futhi fundisa izingane zakho ukugqoka ngendlela efanele futhi enhle. Le ncwadi ebonakala ilula iheha inqwaba yabafundi abasebasha ngoba ngemva kokuyifunda bangakwazi ukuyisebenzisela ngokushesha. Ngicela umeseke ukuze azikhethele izingubo akhumbule nendlela yokugqoka.
Intengo: 15,000 VND
I-Mind Map iyincwadi yesiNgisi yeminyaka emi-3 ephelele ukusiza izingane zizihlomise ngolwazi lwamagama olukhulu. Izincwadi zithengiswa ezitolo eziningi zezincwadi ezinedumela elihle, omama bangathola kalula futhi bazithenge ngaphandle kobunzima obuningi. Kubazali abangazange bafunde isiNgisi isikhathi eside, lesi futhi isiphakamiso esiphelele sokufunda nokusebenzisana nezingane zabo.
Okuqukethwe: Le ncwadi iqoqo lamagama amaningi esilulumagama anezihloko ezahlukene, ikakhulukazi emndenini, izinhlamvu zamagama, imibala, umzimba, igumbi ngalinye emndenini…Isihloko ngasinye sizoba nenani. . Izingane zingahlobanisa izithombe namagama ukuze zikhumbule amagama ngokunembe kakhulu.
Intengo: 99,000 VND
Izindlela zokufundisa isiNgisi ezinganeni ezineminyaka emi-3
Ukukhetha incwadi efanele kubaluleke kakhulu. Nokho, ukusebenzisa indlela yokufunda ukuze ingane yakho ikuthole kalula kubaluleke nakakhulu. Nazi izindlela zokufundisa isiNgisi ezinganeni ezineminyaka engu-3 omama abangazisebenzisa ukuze bathole imiphumela engcono kakhulu.
Funda ezintweni ezijwayelekile
Vumela ingane yakho ukuthi ifunde futhi ijwayele izinto ezijwayelekile endlini. Noma yimiphi imibuzo ingane yakho enayo ngezinto, ngicela uyiphendule ngesiNgisi ukuze ingane yakho iyikhumbule futhi ingaphinde ibuze. Ukusetshenziswa kwale ndlela kuzosiza izingane ukuba zikhumbule ulwazimagama ngendlela efanele kanye nokubiza amagama. Izingane ezineminyaka emi-3 zifunda ngokushesha okukhulu, uma zisetshenziswe ngendlela efanele kuzoba yisisekelo esihle sokuzisiza zifunde isiNgisi kahle ngokuhamba kwesikhathi.
Funda ngezithombe, amavidiyo anemibala
Izingane eziningi zinesithakazelo kakhulu ezintweni ezimibalabala, ikakhulukazi imibala ekhanyayo. Ungavumela ingane yakho ukuthi ifunde isilwane noma iphalethi yombala futhi uyifundise ukuyibamba ngekhanda ngesiNgisi. Lokhu kuzosiza ingane yakho ukuthi iqinise ukucabanga kwayo nemicabango lapho idinga ukuhlangana.
Izingoma zesiNgisi ezinemisindo ehlekisayo zizosiza ingane yakho ithole ulwazimagama oluthe xaxa futhi ijwayeze amakhono ayo okulalela nokukhuluma. Izingoma ezidumile ngokuvamile izingoma zokubala amagama, izingoma zokubala izinombolo noma izingoma ezinamagama alula aphindaphinda kaningi. Lena indlela yokufunda ejwayeleke kakhulu esetshenziswa othisha abaningi, izikhungo zesiNgisi nochwepheshe.
Funda ngama-jigsaw puzzle
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokufunda ukudlala ngenkathi ufunda. Izingane zizofunda ulwazimagama oluningi ngemidlalo, futhi zandise ukusebenza kobuchopho ngokuzihlanganisa nokuyihlela kabusha ibe imisho ephelele. Izithombe ezinemibala ephrintiwe ku-puzzle ziyizici ezikhangayo ezinganeni.
Yisebenzise izikhathi eziningi futhi uyibuyekeze kaningi
Izingane zizokhohlwa ngokushesha uma umama engabukezi. Cela ingane yakho ukuthi ikhumbule futhi ihlole nsuku zonke lokho ekufundile ngaphambili ukuze uqiniseke ukuthi ikhumbula ngokujulile.
Nazi izincwadi Izincwadi zokufunda isiNgisi zezingane ezineminyaka emi-3 Okungcono kakhulu abazali abangabhekisela kukho futhi bakuthenge. Sethemba ukuthi lesi sihloko siletha ulwazi oluwusizo!
Galaxy J6 Prime lộ thông số kỹ thuật, là phiên bản đổi tên của J6 Plus? | Muasalebang